I- Edge Hill Hut ~ I-Romantic Getaway w Iimbono Ezintle - I-Airbnb
I- Edge Hill Hut ~ I-Romantic Getaway w Iimbono Ezintle
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguMelissa
Apho inqugwala lamahlathi lidibana nokuphila kwale mihla..
Eli nqugwala linendawo ekhethekileyo kwaye linestayile salo sonke. Iinduli eziphakamileyo phezu kweGreat Lake Taupo, indawo oyibonayo iza kukuyekisa ukuphefumla. Enoba uzipholele kwibhafu ephandle, okanye wonwabele iglasi yewayini oyithandayo, le yindawo efanelekileyo yokuphumla uze uzihlaziye. Vuka qho kusasa ukuya kutsho ekuphumeni kwelanga okumuncis 'iintupha emanzini.
Enoba ufuna iholide yabantu ababini abathandanayo okanye nje kwenye indawo ukuze wonwabele impela-veki edlulileyo, le ndawo inazo zonke izinto ozidingayo ukuze uzikhuphe ungenazinkathazo! Indawo entle, ligumbi lokulala eliyi-1 (1 Queen) elinekhitshi elinento yonke, igumbi lokuhlambela elinye elinendlu yangasese. Indawo evulekileyo yokubuka ichibi neendawo ezintle onokuzibona ngaphaya kwedolophu i-Taupo ukuya kwi-Mt Tauhara.
Ngexesha lokuhlala kwakho zive ukhululekile ukuba uzipholele kwibhafu entle ephandle, okanye uhlale ngasemlilweni wasemaphandleni. uze wonwabele iglasi yesiselo osithandayo.
Yimizuzu eyi-12 kuphela ukusuka kwiziko ledolophu yaseTaupo
Ivenkile yokutyela iLarte ephumeleleyo kunye negalari yemizuzu eyi-2 phantsi kwendlela kunye neWhakaipo Bay ulwandle oluhle lokuqubha. Ukuhamba emahlathini ekuhlaleni. Indawo ethe cwaka nezolileyo ejikelezwe yindalo.
Siza kufumaneka xa ufuna kodwa siza kukushiya ukonwabele ukuhlala kwakho unoxolo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Taupō